शिव को हुन् ? भगवान, मिठो कल्पना वा युगपुरुष ? : रहस्यमय खोज – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन २३, बिहीबार ०६:४०
यो संसारमा जति मानिस छन् ति मानिसहरुमा भगवानको बारेमा आ-आफ्नै धारणा बनेका छन् । कतिपयका नजरमा ईश्वर छन् त कतिपयका नजरमा ईश्वरको अस्थित्व केवल कोरा कल्पना मात्र हो भन्ने धारणा रहेको छ । वास्तवमा ईश्वर के हो? ईश्वको के अस्थित्व छ ?भन्ने वारेमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयासमा हामी सधै तपाइको साथमा रहने छौं । जिवन सास्वत हो र सत्य हो । जव प्रकृति र विज्ञानको खोज हुन थाल्यो यसले इश्वरिय शक्तीको बारेमा फरक धारणा को विकास गरिदियो ति धारणा र तिनको वास्तबिकताको बारेमा हामी तपाईमाझ ल्याउँदै जाने छौं
शिव को हुन् ? भगवान, मिठो कल्पना वा युगपुरुष ? भनिन्छ शिवको गहिरो अर्थ छ, जो एक मात्र सत्य हो । कतिपय भौतिकवादि हरु भन्छन्, शिव तथाकथित भेषधारिहरुको कोरा कल्पना हो । त्यस्तै अध्यात्मबादिहरुको लागी शिब नै ब्रम्माण्ड हो शिव नै सत्य शिब नै ईश्वर हो ।
मानिस, कल्पना वा भगवान?
शिव को हो ? हिन्दु आध्यात्मिक संस्कृतिको सबैभन्दा अलौकिक ईश्वरिय तत्व महादेव नै हो । शिवको बारेमा धेरै कथाहरू र दन्त्यकथाहरू हामीले सुनेका छौं । शिब भगवान हो वा हिन्दू संस्कृतिको कोरा कल्पनाहरू हुन् ? वा शिवको गहिरो अर्थ छ, जो सत्य खोजी गर्नेहरूका लागि यो एउटा अधार बन्न सक्छ ।
जब अध्यात्मिकहरुले ‘शिव’ भन्छन् तव उनिहरुले दुई आधारभूत चीजलाई वुझ्दछन् । ‘शिव’ को शाब्दिक अर्थ “शुन्य” । जसको न सुरुवात छ न त अन्त्य । जुन केहि हुँदै होइन । आजको आधुनिक विज्ञानले यो प्रमाणित गर्‍यो कि यस सृष्टिको सबै थोक शून्यताबाट आउँदछ र केही पनि फर्कदैन। यस अस्तित्वको आधार र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको मौलिक गुण एक विशाल खाली स्थान हो। यसमा रहेका आकाशगंगाहरू केवल सानो सानो खण्ड जस्तै छन्। त्यस बाहेक अरू सबै खाली ठाउँमा रहेको बिराट अस्थित्व छ, जसलाई शिव भनिन्छ। शिव भनेको गर्भ नै हो जहाँबाट सबै कुराको जन्म हुन्छ, र ती विस्मृतता हुन्छन् । जसमा सबै कुरा पुनर्मिलन हुन्छ । सबै कुरा शिवबाट आउँछ, र फेरि शिवमा सर्छ । तर भौतिक वादिहरुको धारणा फरक छ । जब स्टेफन हकिङ्ले ब्लाकहोलको तथ्यका बारेमा केहि प्रमाणहरु दिए, त्यस पछि यो ब्रमाण्डको उत्पति र अन्त्यमा ईश्वरको कुनै हात नभएको बताउँछन् । उसो त १७ औं सताव्दिमा नित्सेले बिज्ञानको विकास संगै ईश्वरको मृत्युको घोषणा गरेका थिए ।
अन्धकार भित्रको शिव अस्तित्व
आध्यात्मबादिहरुले शिव अस्तित्व जस्तो मात्र नभई पुर्ण ‘अवस्थित’ छ भनेर वर्णन गर्दछन् । शिब प्रकाश जस्तै हो, जो अरुलाई प्रकाश दिएर आफु सधै अँध्यारो रहन्छन् त्यसैले शिव अदृश्य छन् । मानिसले जहिले पनि प्रकाशको गुणगान गाउँदछ, किनकि तिनीहरूको आँखा प्रकाशमा मात्र काम गर्दछन् । शिव तत्व त्यो हो जसले अरुलाई सधै प्रकास दिन्छ। अन्यथा, केवल यो ब्रमाण्ड सँधै अँध्यारो हुन्छ। प्रकाशको अस्तित्व सीमित छ, किनकि कुनै पनि प्रकाशको स्रोत, चाहे यो बल्ब हो वा सूर्य, अन्ततः प्रकाश फैलाउन रोकिनेछ। प्रकाश अनन्त छैन। यो सँधै सीमित हुने सम्भावना हुन्छ, किनकि यसको सुरू र अन्त हुन्छ। अँध्यारो प्रकाश भन्दा धेरै ठूलो सम्भावना हो। अन्धकारमा केहि पनि जलाउन आवश्यक पर्दैन, अन्धकार सधैं रहन्छ। अन्धकार अनन्त छ। अँध्यारो जताततै छ यो एक मात्र चीज हो जुन जताततै व्याप्त छ।
वास्तवमा “ईश्वरीय अन्धकार” को बारेमा मानिसहरूले सोच्छन् जे म सोच्दै छु त्यो सहि हो जे मलाई गलत लाग्छ त्यो गलत हो तर बास्तविकता यो भन्दा फरक छ । सत्यको कुरा हो भने, पश्चिममा केही ठाउँहरूमा यो प्रचार भइरहेको छ कि शिव भूत हो ! यसले मानिसमा ईश्वरिय तत्वको वारेमा झन गलत मनोबिकार पैदा गरेको छ । जव मानिस शिव जीको आलौकिक रुपको बारेमा जान्दछ तब उ न त ईश्वर को बारेमा खोज्दछ न त यो धारणा नै बनाउँदछ ।